Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Austria » Vienne dia nanapa-kevitra ny hitazona ny ben'ny tanàna ankafizin'i Adolf Hitler
Vaovao Mafana Austria • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nanapa-kevitra ny hitazona ny ben'ny tanàna ankafizin'i Adolf Hitler i Vienne.
Nantsoina hoe ‘mpanjakan’i Vienne’ i Lueger, ka namory vahoaka hanohitra ny Jiosy, ary nilaza azy ireo ho “olona namono an’Andriamanitra” sy “mpandrombaka ny tompon-tany”.
Voalaza fa nanome aingam-panahy an'i Adolf Hitler ny politikan'ny vahoakan'ny ben'ny tanàna Karl Lueger.
Nilaza ny governemanta Vienne fa hisy fandaharan'asa roa taona hatomboka hamerenana indray ny sarivongan'ny ben'ny tanàna teo aloha Karl Lueger.
Ny fanapahan-kevitra hitazomana ny sarivongan'i Lueger dia nanaraka ny fifanakalozan-kevitra tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tao an-tanàna momba ny fomba hiatrehana ny lova nampiady hevitra ny ben'ny tanàna.
Nolavin'ny governemantan'i Vienne renivohitra Aotrisy ny fangatahana hanesorana ny sary sokitra mijoalajoala an'i Karl Lueger, ben'ny tanànan'i Vienne teo aloha, izay nolazaina fa nanome aingam-panahy ny mpanao didy jadona Nazi ho avy. Adolf Hitler.
Raha tokony hanesorana ny tsangambato, ViennaNy ben'ny tanàna am-perinasa, Michael Ludwig, dia nilaza fa mankasitraka ny fizotran'ny 'contextualization artistic'.
Nanambara ny governemanta Vienne fa hisy fandaharan'asa haharitra roa taona hamolavolana indray ny sarivongan'ny ben'ny tanàna teo aloha Karl Lueger. Mbola ho hita eo ny fomba hijeren’ny sarivongana ny ‘contextualization’, satria mbola tsy misy ny fifampidinihana sy ny tolo-bidy.
Ny fanapahan-kevitra hitazomana ny sarivongan'i Lueger, izay nifehy ny renivohitra Aotrisy nanomboka tamin'ny 1897 ka hatramin'ny 1910, dia nanaraka ny fifanakalozan-kevitra tamin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany ao an-tanàna momba ny fomba hiatrehana ny lova nampiady hevitra ny ben'ny tanàna.
Current Vienna Ny ben'ny tanàna Michael Ludwig dia manantena fa tsy hifarana ny tetikasa raha tsy amin'ny 2023, manamarika fa hisy ny tolo-bidy ho an'ny fisehoan'ny sarivongana ho avy. Nilaza izy fa homena loka ny tetikasa mpandresy a “kilasy ambony” mpitsara. Tsy nisy tetibola voatondro ho an’ny tetikasa, ary tsy fantatra mazava na hisokatra ny tolo-bidy na ho an’ireo mpifaninana nasaina ihany.
Nantsoina hoe 'mpanjakan'ny Vienna', namory vahoaka hanohitra ny Jiosy i Lueger, ka nilazalaza azy ireo ho “olona namono an’Andriamanitra” sy “mpandrombaka ny tompon-tany”.
mpitarika Nazi Adolf Hitler, izay nandany telo taona tao an-drenivohitr'i Aotrisy fony i Lueger no nitantana, dia nanoritsoritra ny ben'ny tanàna ho “ben'ny tanàna alemà faran'izay tsara indrindra hatramin'izay” tao amin'ny manifesto autobiographical 'Mein Kampf'.
Efa ela i Aotrisy no niady tamin'ny lova navelan'i Lueger. Na dia teo aza ny fanavaozana ny iray amin'ireo arabe malaza indrindra - nantsoina taloha hoe Karl Lueger Ring - tamin'ny 2012, dia mbola mijanona ho fanomezam-boninahitra azy ny fiangonana, ny kianja, ny tetezana, ny takela-by telo ary ny sarivongana 13 metatra.